Iindlela Zokugcina Ukutya: Ukunkonkxa, ukunqanda ubushushu, kunye nokoma
Ngu-Amelia Jeanroy, Karen Ward
Ungakugcina ukutya ngexabiso eliphantsi ngokusebenzisa ukunkonkxa, ukubanda, okanye ukomisa iindlela. Iindlela zale mihla zokulondolozwa kokutya, njengokufaka amanzi enkonxeni, zikuncede kwaye ugcine ngokulula. Emva kokuba uqonda iinkqubo ezisisiseko zendlela yokulondolozwa kokutya, kuya kufuneka ujolise ekulungiseleleni iresiphi yakho.
Malunga nokutya enkonkxiweyo
Ukunkonkxa yinkqubo yokufaka ubushushu ekutyeni okutywiniweyo engqayini ukuze kutshabalalise naziphi na izinto ezincinci ezinokubangela ukonakala kokutya. Iindlela ezifanelekileyo zokunkonkxa zinqanda lo monakalo ngokufudumeza ukutya ixesha elithile kunye nokubulala ezi ntsholongwane zingafunekiyo. Ngexesha lenkqubo yokunkonkxa, kuqhutywa umoya engqayini kwaye kwenziwe into njengoko ingqayi iphola kwaye itywina.
Nangona unokuva ngeendlela ezininzi zokunkonkxa, kuphela Mbini zamkelwe liSebe lezoLimo laseMelika (USDA). Oku kunkonkxwa ngamanzi okuhlamba kunye nokucinezela uxinzelelo:
Ukunkonkxa ngamanzi: Le ndlela, ngamanye amaxesha kubhekiswa kuyo njenge Ukunkonkxa ngamanzi ashushu, usebenzisa iketile enkulu yamanzi abilayo. Izimbiza ezizalisiweyo zitshisiwe emanzini kwaye zifudunyezwe kubushushu bangaphakathi be-212 degrees kangangexesha elithile. Sebenzisa le ndlela ekuqhubeni ukutya okune-asidi ephezulu, ezinje ngeziqhamo, izinto ezenziwe ngeziqhamo, i-pickles, ukutya okutyiwa, kunye neetumato.
isetyenziselwa ntoni i-ciprofloxacin
Ukucinezelwa koxinzelelo: Ukucinezelwa koxinzelelo kusetyenziswa iketile enkulu evelisa umphunga kwigumbi elitshixiweyo. Iingqayi ezizalisiweyo kwiketile zifikelela kubushushu bangaphakathi bama-240 degrees phantsi koxinzelelo oluthile (oluchazwe ngeepawundi) olinganiswa ngegeji yokudayala okanye igeyiji enesisindo kwisembozo se-canner. Sebenzisa i-canner yoxinzelelo ekuqhubeni imifuno kunye nokunye ukutya okune-asidi encinci, njengenyama, inkukhu kunye nentlanzi.
Musa ukudibanisa isitya soxinzelelo kunye nesipheki soxinzelelo, esetyenziselwa ukupheka ukutya ngokukhawuleza. Umpheki woxinzelelo akanayo indawo eyoneleyo yezimbiza zokunkonkxa kunye namanzi afunekayo ukwenza uxinzelelo olufanelekileyo lokugcina ukutya.
Iindlela ezindala zokunkonkxa azithembekanga kwaye, ngenxa yeso sizathu, azisetyenziswanga okanye azikhuthazwa namhlanje kunkonkxwa ekhaya. Ngamaxesha athile, ezi ndlela zivuselelwa njengokukhawuleza kwaye zilula kunokuhlamba amanzi okanye ukucofa uxinzelelo, kodwa ukusebenzisa ezinye iindlela kufana nokudlala i-roulette yaseRussia ngokhuseleko lwakho lokutya.
Malunga nokutya okubandayo
Ukutya okubandayo bubugcisa bokulungiselela, ukupakisha, kunye nokutya okubandayo kwindawo yabo yokutsha. Ungafriza uninzi lwemifuno kunye neziqhamo, inyama kunye nentlanzi, isonka kunye neekeyiki, kunye nesuphu kunye necasseroles. Izitshixo zokumisa ukutya kukuqinisekisa ukuba kutsha ngokupheleleyo, kwaye ukukugcina njengomkhenkce ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka, kwaye ukukugcina kubushushu obufriziweyo obufriziwe (0 degrees).
yintoni le metronidazole
Ukupakisha ngokufanelekileyo ukutya kwiphepha lesikhenkcezisi okanye izikhongozeli zesikhenkcezisi kuthintela nakuphi na ukonakala kumgangatho wayo. Umonakalo wenzeka xa ukutya kwakho kudibana nomoya owomileyo wesikhenkcezisi. Nangona ukutya okonakaliswe ngumkhenkce kungayi kukwenzakalisa, kwenza ukutya kunganambitheki.
Nazi izinto ezintathu zokukunceda ukunqanda ukutshiswa kwesikhenkcezisi:
Iziphumo zexesha elide zyrtec
Ukunciphisa ukubonakaliswa komoya: Songa ukutya ngokuqinileyo.
Gwema ukuguquguquka kwamaqondo obushushu: Gcina ifriji ivaliwe kangangoko. Yazi into ofuna ukuyisusa phambi kokuvula umnyango.
Sukuzalisa ngaphezulu kwesikhenkcezisi sakho: Isikhenkcezisi esigcweleyo sinciphisa ukujikeleza komoya kunye nesantya somonakalo wesikhenkcezisi.
Malunga nokomisa ukutya
Ukomisa yeyona ndlela indala eyaziwa ngokugcina ukutya. Xa usomisa ukutya, ukubeka ukutya kwiqondo lobushushu eliphezulu ngokwaneleyo ukuba ususe ukufuma kodwa liphantsi ngokwaneleyo ukuba akupheki. Ukujikeleza komoya okuhle kuyanceda ekomiseni ukutya ngokulinganayo.
Isixhobo sokubulala umbane sesona sixhobo silungileyo nesomeleleyo sokomisa, okanye sokuphelisa amanzi emzimbeni, ukutya. Iiyunithi zanamhlanje zibandakanya i-thermostat kunye nefeni yokunceda ukulawula amaqondo obushushu ngcono kakhulu. Unokomisa ukutya kwi-oveni yakho okanye ngokusebenzisa ubushushu belanga, kodwa le nkqubo iyakuthatha ixesha elide kwaye ivelise iziphumo ezingalunganga kukutya okomiswe kwisidambisi-manzi.
Umahluko phakathi koxinzelelo kunye nokuhlaselwa kukothuka
ukuphindaphinda indlela yokubhala yezenzululwazi
isiseko esibonakalayo sokufikelela kwezicelo
indlela yokuphakamisa ngokufanelekileyo ubunzima
Igama lam lise-Italiya